Ninkii diley wariyaasha oo dhintey
27 August, 2015 (GO)-Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in la aqoonsaday shakhsigii ka dambeeayay dilka laba wariye oo shalay lagu diley Virginia xilli ay ku jireen tabin toos ah.
Ninkaasi oo lagu magacabi jirey Lester Flanagan ayaa gacantiisa isku diley.
Booliska deegaanka Franklin County ayaa xaqiijiyay geerida Flanagan, waxayna sheegeen inuu is diley ka dib markii uu xawaare ku soo galay jid gooyo ay dhigteen Booliska deegaankaasi.
Flanagan ayaa fariin qoraal ah oo u direy ABC news, waxa uu ku sheegey in lagula kacay Cunsuriyad isla markaana lagu tilmaamey inuu ka midyahay nimanka u galmooda ragga, taasi oo sabab u noqotey in shaqada laga cayriyo.
War ka soo baxay Aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegey in arintaasi ka maqraati kacayso dhibaatada ay horseeday adeegsiga hubka sharci darada ah ee lagu dhex wato suuqyada mareykanka, waxaan loogu baaqay Congress-ka inuu soo saaro go'aamo hubka lagu mamnuucayo.